RupeeSend को सेवा भनेको?
Rupeesend, भनेको,वित्तीय सेवा एजेंसीमा दर्ता भई बैदेशिक रकम स्थानान्तरण गर्न स्वीकृति पाएको कोरियाबाट नेपालमा पैसा पठाउने रेमिटान्स सेवा हो। (License No. MSOF 2017-03).
छिटो ,भरपर्दो,विश्वसनीय,सुविधायुक्तको साथै सस्तो शुल्क र उत्कृष्ट विनिमय दर।
हामी सबैभन्दा राम्रो विनिमयदर, सहज र गुणस्तरिय सेवामा विश्वास गर्छौं, ग्राहकहरुको सेवा सुबिधा नै हाम्रो प्राथमिकता रहेको छ ।
हाम्रो झन्झट बिनाको रेमिट सेवा लिई आनन्दित हुनुहोस ।
Rupeesend,नेपालको केन्द्रिय बैंकको अनुमति प्राप्त Sansar Remit pvt.Ltd संग संलग्न भई ,नेपालको १४ अन्चल,७७ जिल्लालाई नै समेट्ने ठुलो नेटवर्क संजाल बोकेको रेमिटान्स सेवा हो। नेपालको अधिराज्यभरी रहेका बैंकहरुबाट सजिलै.(*1) भुक्तानी लिन सक्नुहुन्छ। यदि नगद लिनुहुन्छ भने. रेमिटान्स पुरा भएको 10 मिनेटको अन्तरालमा नै.(*2) लिन सक्नुहुन्छ। बैंक डिपोजिटको खण्डमा , प्राय जसो बैंकहरुमा 45 मिनेट भित्र डीपोजिट हुनेछ ।
*1： नेपाल भित्र रकम भुक्तानी गर्ने बैंक वा काउन्टरको सन्दर्भमा, हाम्रो वेबसाइट अथवा हाम्रो एजेन्टको वेबसाइटबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ।
*2： रेमिटान्स विधि वा नेपालमा बैंक, काउन्टरबाट भुक्तानी हुने समय,हैंडलिंग अवस्था अनुसार रेमिटान्स गरेको केहि समय देखि २४ घण्टासम्म लाग्न सक्छ।
rupeesend प्रयोगका3फाइदाहरु
Point 1. विश्वसनीय सेवा
Point 2. सजिलो र सुबिधाजनक
कोरिया र नेपाल सरकार दुबैको वित्तीय सेवा एजेन्सी देखि स्वीकृति पाएको !
RupeeSend लक्ष्य भनेको कोरिया र नेपाल सरकारको रकम भुक्तानी सम्बन्धी नियम कानुन पालना गर्दै गुणस्तरिय सेवा प्रदान गर्ने हो ।
साथै, तपाईंले पठाउने पूरा रकम सरकारहरु द्वारा ग्यारेन्टी गरिएको छ ।
※ C-Square Korea Inc. MOSF License No. 2017-03
जुनसुकै समयमा ,जहाँबाट पनि online वा offline रेमिटान्स!
तपाईले जुन सुकै समयमा जहाँबाट पनि web browser वा mobile App को प्रयोग गरी सदस्यता दर्ता तथा रेमिट गर्न सक्नु हुनेछ । Auto debit बनाउनुभएमा बैंक ट्रान्सफर पनि गर्नु पर्दैन ।
अतिरिक्त जानकारी चाहिएमा फोनबाट वा हाम्रो काउन्टरमा आउनु भई नेपाली भाषामा जानकारी लिन सक्नु हुनेछ ।
कम शुल्क मा राम्रो रेट
सेवा शुल्क ५००० वोन मात्र , विद्यार्थी को लागि सेवा शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट.
राम्रो रेट र सहज सेवाको लागि सधै rupeesend लाई सम्झनुहोस् ।
तुरुन्तै दर्ता गर्नुहोस् ।
(विद्यार्थी को लागि ५०% छुट)
अधिकतम रेमिट गर्न सकिने रकम
5,000 USD १ पटकमा, 50,000 USD १ बर्षमा
※नेपालमा नगद भुक्तानी लिनु परेमा १ पटकमा १00,000 नेपाली रुपैयाँ मात्र लिन सकिने छ ।
न्युनतम रेमिट गर्न सकिने रकम
हाम्रो web site मा विनिमय दर परिवर्तन भई राखेको हुन्छ । वास्तविक विनिमय दर रेमिट process हुने समयमा जुन छ त्यो नै लागू हुनेछ ।
* तपाईहरुको जानकारी को लागि विनिमय दर हाम्रो वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ।
रकम प्राप्त गर्ने विधि
1. नेपाल अधिराज्य भित्र भएको बैंक खातामा रकम जम्मा गर्ने (Account Deposit)
2. साझेदारी बैंकको काउन्टर,SansarRemitको काउन्टरबाट रकम प्राप्त गर्ने (Cash payout)
सदस्यदर्ताको लागि चाहिने योग्यताहरु
तलको सर्तहरु पुरा भएमा मात्र सदस्यता दर्ता गर्न सकिने छ । कृपया हाम्रो सर्तहरुमा सहमती जनाउनुहोस् ।
(1) ID प्रमाणीकरण प्रक्रिया पुरा भएपछि मात्र Rupeesend को सदस्य दर्ता गर्न सकिनेछ ।
(2) Rupeesend को सदस्यता दर्ता गर्ने समयमा Valid Visa हुनु पर्नेछ ।
सदस्यताको अबधि / रद्द गर्ने
एकपटक सदस्यता दर्ता गरेपछि सधै भरि लाई कायम रहनेछ, भिसा तथा अन्य कुनै कुरामा परिवर्तन भएमा सो को जानकारी हामीलाई गराउनु पर्नेछ ।
सदस्यता रद्द गर्नु परेमा कुनै शुल्क लाग्ने छैन ।
रेमिट रद्द गर्ने
रेमिट गरेको रकम प्राप्त कर्ताले लिन नसकेको खण्डमा रद्द गर्न सकिने छ ।
यदि रेमिट स्थितिमा "भुक्तानी प्रक्रियामा", छ भने मेरो पेजको अर्डर विवरण मा गएर रद्द गर्न सकिने छ ।
अन्य स्टाटस मा छ भने रुपिसेंडको ग्राहक सेवा केन्द्रमा सम्पर्क गर्नु होला ।
रेमिटान्स प्रक्रिया पुरा भएको खण्डमा सेवा शुल्क फिर्ता गरिने छैन,कृपया बुझिदिनु होला।
रेमिटान्स आबेदनको रद्द गर्दा लाग्ने शुल्क
अर्डर प्रक्रिया पूरा हुन लाग्ने समय
1. प्रापकको बैंक खातामा जम्मा(रेमिटान्स)गर्ने अबस्थामा, रेमिटान्स प्रक्रिया शुरु गरेपछी काठमाडौँ valley भित्रका3वटा सहर ( काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर) मा रहेको कुनै बैंकमा खाता भएको अबस्थामा2घण्टा जति मा जम्मा हुनेछ र बैंक शाखा नभएको अबस्थामा १ दिन सम्म लाग्न सक्नेछ।
2. नगद भुक्तानी: हाम्रो एजेन्टको काउन्टर,बैंकको काउन्टरबाट नगद प्राप्त गर्ने हो भने पैसा पठाएको 10 मिनेट भित्रमा
* रेमिट पुरा भएको तुरुन्तै जानकारी गराइने छ ।
- सदस्यता दर्ता को लागि एलियन कार्डको अगाडी, पछाडी र कोरियाको बैंक पासबूकको अगाडी को पेजको फोटो खिचेर अपलोड गर्नुहोस्
-अर्डर प्रक्रिया अगाडी बढाउनको लागी बैंक ट्रान्सफर पुरा भएको screenshot अथवा ATM बाट प्राप्त स्लिप अपलोड गर्नुहोस्.
- रेमिटान्स रकम,रेमिटान्स संख्या,रेमिटान्स उद्देश्य आदिको आधारमा थप कागजातको अनुरोध गर्न पनि सकिने छ ।
नगद भुक्तानीको सन्दर्भमा,रेमिटान्स पुरा भएपछी SMS अथवा ईमेल बाट प्राप्त भएको जानकारी(Reference NO.)र प्रापकको परिचय पत्र सम्बन्धित काउन्टरमा प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ। रेमिटान्स गर्ने व्यक्तिले आफै जिम्मेबारी बहन गरि (Reference NO.)प्रापकलाई पठाउनुपर्नेछ।